NUSOJ oo war ka soo sartay talaabadii Puntland ay ku xayirtay Warsidaha Puntlandtimes
Ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee (NUSOJ) ayaa maamulka Puntland ka dalbaday inay ka laabtaan xayiraada lagu soo rogey warsidaha Puntlandtimes oo wasaarada warfaafinta Puntland ku amartay shirkadaha bixiya Internetka ee Puntland ka shaqeeyaa inay xayiraad saaraan website kaasi.
Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Axmed Xasan (Sabarey) ayaa maalintii Isniinta ahayd ee 2 September 2019 shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Garoowe wuxuu si toos ah ugu amray shirkadaha Isgaarsiinta ee bixiya Internetka ay si buuxda u xayiraan macluumaadka iyo wararka Puntlandtimes. kadib warar lagu daabacay boga warsidaha Puntlandtimes oo la sheegay inay ka caraysiiyeen madaxda maamulka Puntland, masuuliyiintu ma aysan sheegin wax sabab ah oo lagu xirayo website ka mana jirin maxkamad loo gudbiyey arinta ka hor intaan talaabadan la qaadin.
Tifaftiraha warsidaha Puntlandtimes Faraax Cabdulqaadir Geylan oo la hadlay NUSOJ ayaa sheegay in aan si rasmi ah loogu wargalin talaabadan la dhaqan galiyay, laakiin shirkadda Golis ay u xaqiijisay inay heleen awaamiirta Wasiirka. Wuxuu intaas ku daray in uusan ka warqabin sababta ay dowladda Puntland u go’aansatay inay xayirto degelkiisa.
Waxaa si weyn loo rumeysan yahay in Wasiir Sabarey iyo hoggaanka sare ee Puntland aysan dulqaad u lahayn wararka xasaasiga ah ee ku saabsan xiriirka u dhexeeya Puntland iyo Imaaraadka Carabta iyo booqashadii uu dhowaan madaxweynaha Puntland Saciid Deni ku tegey Imaaraatka taasoo warsidaha Puntlandtimes wax ka qoray.
Sidoo kale Puntlandtimes.com waxay qortay cabashooyinka ka imanaya shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo ku saabsan mushahar la’aan joogto ah.
“Dhibaataynta warbaahinta Online ka ah iyo website yada iyo suxufiyiinta qoraa maaha mid ku cusub Puntland laakiin xayiraada Puntlandtimes ee maamulka hadda jiraa waxay muujinaysaa in kor u kac wayn ku yimi siyaasada xakamaynta wararka , dhaleecaynta tooska ah, iyo fikirada xorta ah.” ayuu yiri xoghayaha guud ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cismaan.
“Waxaan dalbanaynaa in laga laabto xayiraada la saaray website ka taasoo tacadi ku ah xoriyada aasaasiga ah ee saxaafada iyo ilaalinta fikirka sida uu damaanad qaadayo dastuurka KGM ah ee dalka oo qeexaya xoriyada iyo madax banaanida warbaahinta iyo mabaadida dheelitirnaanta wararka oo ay tahay marwalba in masuuliyiintu Ixtiraamaan.” ayuu hadalkiisa raaciyey.